२ दिनमा ‘जय भोले’ को १ करोड बढी कमाइ ! « Ramailo छ
२ दिनमा ‘जय भोले’ को १ करोड बढी कमाइ !
प्रकाशित मिति : Oct 18, 2018
फिल्म ‘जय भोले’ले दुई दिनमा एक करोड ४ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको निर्माण पक्षको दाबी छ । बडा दशैं २०७५ को शुभ अबसरमा ३० असोज फुलपातीबाट देशव्यापी फिल्म रिलिज भएको हो ।
यसपालीको दशैं जय भोलेसँगै भन्ने नारा सहित रिलिज भएको जय भोलेको व्यापार दिन प्रतिदिन बढी रहेकाले बिजया दशमीको दिन अझै राम्रो हुने पनि निर्माता निर्देशक अशोक शर्माले आशा व्यक्त गरेका छन् । ‘निकै लामो समयपछि राम्रो फिल्म हर्न पाएको प्रतिक्रिया दर्शकबाट पाएका छौं । यसले गर्दा हामी अझ बढी उत्साहित छौं र हामी दशैंमा पनि सिनेमा हलमा दर्शकबीच नै हुनेछौं’ शर्माको भनाई छ । स्वस्तिमा र बुद्धिसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
निर्माता एवम् निर्देशक अशोक शर्मामा अनुसार फुलपातीको दिन भन्दा अष्टमीको दिन जय भोलले निकै राम्रो व्यापार गरेको छ । उनले व्यापार बारे भने,‘दर्शकहरुले फिल्म मन पराउनु भएका कारण जय भोलेको व्यापार उत्साहजनक रुपमा बढी रहेको छ । पहिलो दिन ४६ लाख ग्रस व्यापार गरेको जय भोलेको दोस्रो दिनको ग्रस व्यापार ५७ पुगेको छ र आज बिहानको शो देखि नै व्यापार अझै राम्रो देखिएको छ ।’
जय र भोलेको मित्रताको कथा भन्ने फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने र सौगात मल्ल मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुसँगै फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का, बुद्धि तामांग, सलोन बस्नेत, राजाराम पौडेल, किशोर भण्डारी, लक्ष्मी गिरी, बसुन्धरा भुसाल, जयनन्द लामा, रामचन्द्र अधिकारी, सुरबीर पण्डित लगायतले अभिनय छ ।
राजनराज सिवाकोटीको संगीत रहेको यो फिल्मलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेको हुन् । यो फिल्म यतिबेला मुलुकका १२५ ओटा हलहरुमा लागिरहेको छ ।